वास्तु शास्त्र अनुसार शौचालय कुन दिशामा बनाउने ? - Sawal Nepal
काठमाडाैं एजेन्सी २०७७ मंसिर ४, १९:३०
एजेन्सी । वास्तु एउटा यस्तो पूरानो विज्ञान हो जसको मान्छेको जीवनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । वास्तु हरेक स्थानमा काम लाग्छ । जस्तो वास्तु अनुसार शौचालयको पनि खास दिशा निर्धारित छ । त्यसैले चाहे घर होस् या कार्यालय शौचालय निर्माण गर्दा वास्तुलाई ध्यान दिनुपर्छ ।
वास्तुशास्त्रका अनुसार शौचालय घर घरको दक्षिण – पश्चमी दिशाको बीचमा निर्माण गर्नुपर्छ । वास्तु अनुसार शौचालयका लागि यही दिशा उत्तम मानिन्छ । वास्तु अनुसार यस दिशामा शौचालय बनाउदा लाभकारी हुने वास्तुशास्त्रीहरु बताउछन् ।
वास्तु अनुसार शौचालयको दिशा जान्न किन आवश्यक छ ?
वास्तुको नियमहरु पालना गर्दा कुनै हानी हुँदैन । बरु त्यसबाट लाभ नै हुन्छ । तर यी नियमहरुलाई पालना नगर्दा विभिन्न समस्याहरु आइपर्न सक्छन् । त्यसैले शौचालय न हो जहाँ बनाए पनि हुन्छ भन्ने सोच्नु महँगो पर्न सक्छ । शौचालय बनाउदा निश्चित दिशामै बनाउनु बुद्धिमानी हुन्छ ।
शौचालयको मद्दले तपाईले आफ्नो जिन्दगीबाट अनावश्यक चिजहरु बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्छ । यसका लागि दक्षिण पश्चिम दिशा उचित मानिन्छ । यसकारणले यस दिशालाई वास्तु अनुसार शौचालय निर्माण गर्न उचित मानिन्छ । यस दिशामा शौचालय बनाउदा व्यक्तिले आफ्नो जिन्दगीका अनावश्यक र कष्टकर चिजलाई सजिलै विसर्जन गर्न सक्छन् । त्यसैले खराब ऊर्जा भएको स्थानमा शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ ।